China Industry News Factory - Cheap Industry News nokutengesa, ekisipota - Part 2
The US Hoverboard moto zvakakonzera imwe rufu uye kukuvara maviri
Post nguva: 03-15-2017
Maererano US Vezvenhau akashuma March 11, 2017, muna Harrisburg guta nokuda hoverboard moto kuputika chiitiko kwakakonzera kufa mwana, vasikana vaviri vakakuvadzwa, kuwedzera kune mumwe vemoto vakakuvadzwa. Maererano vemoto arondedzerwa, nenguva 8 pm, kuti kutiza, mumwe vanobatwa kubva ...Read more »
Electric Hoverboard kunoita upenyu zvikuru vaitambira & vakasununguka
Post nguva: 03-07-2017
Mazuvano, mitambo razova kufarira mabasa kuhofisi gens, vashandi chena-chipika muhofisi, nezuva pakombiyuta, nhengo imwe neimwe muviri vari kushaya muviri, kunyanya asingatani siyana matambudziko zviduku akasiyana-siyana oushumiri muviri, akadai kwazvo mutsipa, negonzo ruoko, maziso akaoma, ther ...Read more »
The Relationship Between Ul 2272 advertising & Hoverboard
Post nguva: 02-07-2017
Hoverboard ainziwo Scooters kuzvipira vakadengezera, nokuda yapfuura makore 'hoverboard moto chiitiko, The US Consumer Product Safety Association (CPSC) akazivisa kuti zvose kuzvipira vakadengezera sikuta kana Hoverboard vagadziri, importers uye Distributors ose counterbalanced motokari vanofanira zvinoenderana .. .Read more »
Zvakanakira akatasva hoverboard
Post nguva: 12-26-2016
Hoverboards dzakakurumbira chaizvo nhasi uye yava kuitika kuvana, vayaruki uye aults kutora pfupi rwendo pamwe rinotyisa nokuzvidzora pachiyero hoverboard.If uchida kutenga maoko akasununguka hoverboard vana, shamwari kana pachako, iwe unogona kuwana Informations zhinji kubva paIndaneti pamusoro 2 vhiri ...Read more »
Nei yemagetsi sikuta kana skateboard saka akagamuchira pamusoro pamusika?
Post nguva: 12-14-2016
Kupinda gore idzva, yemagetsi nepakati sikuta munda makwikwi ari kuramba dzinotyisa. Vagadziri Major vakatanga zvigadzirwa zvavo idzva, ramba kusimbisa wokura nawo uye chinzvimbo mune mutengi. Munyori hwagara vaiona kuti chimwe chezvinhu zvinokosha Co ...Read more »
Nei nepakati sikuta kuva chena-chipika basa kwebhokisi?
Post nguva: 11-22-2016
Kana ukaenda kubasa, chii chaunonyanya kutya? Ndinotenda vanhu vakawanda vachati kuti vari vanonoka, kana vanobatwawo kwoutsinye vachienda kubasa. Vakawanda vanoenda kubasa nebhazi kfc vatasvi Chokwadi, unogona kusarudza kufamba kure. Uye pakati vatatu vavo pachavo disadv yavo ...Read more »
Unoziva izvi zvinobatsira mazano nokuda vakadengezera sikuta kuramba?
Ko vangani kuti vakadengezera sikuta kuramba mazano? Today regai Koowheel Editor kusuma kwamuri. Kwerunyararo nzira vakadengezera sikuta kana hoverboard: 1. Kushandiswa Koowheel vakadengezera sikuta haagoni kuparadzaniswa basa vhiri, saka tinofanira kuti kuita inspecti zvakakodzera ...Read more »